Marka Xidigu ka faroorsado ayuu gal-gashaa! W/Q Cumar M.Faarax | FooreNews
Home Sheekooyin Marka Xidigu ka faroorsado ayuu gal-gashaa! W/Q Cumar M.Faarax
Marka Xidigu ka faroorsado ayuu gal-gashaa! W/Q Cumar M.Faarax
FoorenewsAug 18, 2012Sheekooyin0
Waxa dhaqan dabiici ah u noqday in marka xidiga siyaasadeed ka foorarsado ee culays uu ka soo waajaho albaabada badan ee uu u garaaco si uu u kasbado codka dadweynaha, ayuu gal-gashaa oo uu xag-xagtaa dhinacyada siyaasadda uu kula hirdamayo.
Waxa uu xajiimeeyaa siyaasigan hadhkii la hadalka ahi dhinacyada uu loolanka kula jiro.waa Maxamed Cabdi Gaboose oo ummadda reer Somaliland ay codkooda ugu quus-gooyeen doorashadii u horeysay ee dalka ka dhacday 15-kii bishii December 2002-dii. Waxa uu xiligaasi ka mid ahaa Urur-siyaasadeedkiisii SAHAN afartii urur ee ku hadhay tartankii doorashada goleyaasha deegaanka, waxaana shacbigu ay u quus-gooyeen isagoo wakhtigaasi wajigiisu ku cusbaa miidaanka siyaasadda.
Dr. Gaboose waxa war-saxaafadeedkii uu soo saaray Sabtidii todobaadkan uu kaga hadlay qodobo badan oo muujinaya bayrta iyo baqaha uu ka qabo inuu tartan la galo 8 urur-siyaasadeed iyo xisbiyo iskugu jira, taasina waxay ku dirqiday inuu af-xumaysto oo uu hafar, ribo iyo calaacal isu barkiyo xukuumadda Somaliland iyo Goleyaasha sharci dejinta oo uu u nisbiyeeyay inay madiidin u noqdeen xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo.
Eedaymaha ugu dhumucda weyn ee Tiraabtii Dr. Gaboose waxay ahayd inuu madaxweynaha ku haaraamay inuu doonayo inay dib u dhacaan doorashada Goleyaasha deegaanku si ay doorashooyinka dambena isku sii riixaan oo ay u suurto-gasho inuu xafiiska sii joogo.
Eedaasi waa mid deg ku jiro oo wakhtigeedii la gaadhin, waxaanu ogayn Dr. Gaboose in Madaxweyne Axmed Siilaanyo aanu xiligan joogin wakhti uu ka baqdo muddo xileedkiisa oo ay uga hadhay muddo sadex sanadood ah. Waa dhaqanka abaal laawaha Guddoomiyaha Ururka UMMADU uu hilmaamay in madaxweynaha Somaliland uu ahaa shakhsigii nashqadeeyay hindisaha lagu balaadhiyay saaxada siyaasadda dalka ee u babac dhigay isla markaana dumiyay cuqdadii laga qabay furitaanka tartanka ururada siyaasadda, taasi oo midhihii ka soo baxay uu Gaboose ka mid ahaa ka faa’iidaysteyaashii mawduucan.
Waxa kale oo jirtay in Madaxweynuhu uu Komishanka doorashooyinka u qadimay oo uu u fudeydiyay lacagtii 25% ahayd ee miisaaniyadda doorashada ee xukuumaddu ku darsato dhaqaalaha lagu hirgeliyo doorashooyinka oo muddo badan laga sugi jiray xukuumadii Rayaale.
12-kii bishii December 2011-kii markii Digtoorku ku dhawaaqayay urur-siyaasadeedkiisa waxa uu Madaxweynaha Somaliland ee uu cambaareynayo ku ammaanay wakhtigaasi inuu madaxweynuhu sameeyay geesinimo weyn, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Siilaanyo, oo fursadan maanta isaga la’aantii aanay suurto gasheen, waxaanay arrintan furashada ururaddu go’aan adag ku ahaa xisbigiisa, shacbigiisana tallada weydiiyay ee shacbigu ku raacay, ayuu is waafajiyay balamadii uu galay xiligii olalaha doorashada. Waxaanu u badheedhay inuu xisbigiisa tartanka geliyo haddii uu doono ha ku hadhee.”
Waxa kale oo uu dharaartaa Digtoorku Madaxweynaha ku majeertay daacadnimo, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Waxaan Madaxweynaha u haynaa ciso iyo sharaf, waxaanan hubaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa daacad u yahay, laakiin haddana kama madhna inay wax badani ka khaldanaan karaan, waxa mucaaridka loo sameeyay inay wax caayaan ee waa in ay dawladda u tilmaamaan wixii ka khaldan.”
Waxa kale oo war-saxaafadeedkii Dr. Gaboose uu si xun ugu gal-gashay Mudaneyaasha Goleyaasha sharci dejinta oo uu ku sifeeyay kooxo sharci darrada taabacsan oo ka shaqaynaya inay suul-daaraan doorashada deegaanka. Waxa uu wakiilada la soo doortay la sii jiidhay xiqdiga uu u hayo Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda ahna Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka WADANI Md. C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo ay isku jifo yihiin isla markaana kaga cudud batay hirdanka hoose ee beeshooda.ka dib markii ay si fudud uga kala daateen hindiseyaal uu damacsanaa inuu ka shaambadaysto shirkii Tallo iyo Tawfiiq ee beelaha Habar-yoonis ay buurta Daallo ee duleedka Ceerigaabo ku yeesheen dhawaan oo ay sida xunbadda u gudheen olaleyaal siyaasadeed ku foognaa oo rajeynayay inay shirkaasi ka soo baxdo.
Waxa hadalka Dr. Gaboose uu ka dhigan yahay nin sara-jooga ku salaamo-naqsaday iyadoo aan la is gaadhinba taasina waa sababta keentay inuu madi ku ahaado ururkiisa oo aanu ku jirin xataa hal qof oo miisaan iyo magac ku dhex leh bulshada Somaliland. Halka Ururka WADANI oo uu had iyo jeer ku dherersadaana ay xubno ka yihiin in ka badan sodon Xildhibaan oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka.
Waa suurto-gal marka xaraarada doorashadu soo dhawaato inuu Komsihanka doorashooyinkana ku eedeeyo inay gacan saar la leeyihiin xukuumadda oo aanu ku kalsoonayn garsoorkooda doorashada. Kalsoonida iyo iimaanka shacbigu ku qabaan Guddoomiyaha Ururka UMMADA waxay cadaan doontaa maalinta codbixinta doorashada deegaanka, waxaana qof waliba uu codkiisa u hibayn doonaa ururka/Xisbiga iyo murashaxa uu jamanayo.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, waxaan ku soo gunaanadayaa inaanay xumada kursigu Digtoorka madaxa ku dhufan xili aan garoonkaba cagta la soo gelin, waxa la gudboon inuu raali-gelin ka bixiyo qadafka badheedhka ah ee uu u soo jeediyay Xildhibanaada goleyaasha sharci dejinta oo ah wakiilada rasmiga ah ee bulsho-weynta kuwaasi oo shuruucda dalku siiyay xasaanad dastuuri ah.
Previous PostAfhayeen Ka Hadlay Qaabka Loo Furdaamiyay Sii Daynta Afar Dhalinyaro Ah Oo Ku Afduubnaa Buuhoodle Next PostGuddida Wanaag Farista Iyo Xumaan Reebista Oo Lagu Wareejiyay Deeq Isugu Jirta Kutub Qur’aan Ah Iyo Dhar